Sidee Midabyadu U Saameeyaan Dabeecadda Iibsiga? | Martech Zone
Sidee Midabyadu U Saameeyaan Dabeecadda Iibsiga?
Wednesday, September 1, 2010 Khamiis, Maarso 18, 2021 Douglas Karr
Sayniska midabada waa mid xiiso leh, sidaan qabo. Naqshadayaasha waaweyn - hadey yihiin gawaarida, qurxinta guryaha, naqshadeeyayaasha garaafka, ama xitaa kuwa adeegsadayaasha adeegsadayaasha ah waxay fahmayaan kakanaanta midabada iyo muhiimadda ay leeyihiin. Laga soo bilaabo palette midabka loo xushay si loo hubiyo inay siiso wada noolaansho - midabada dhabta ah ee la adeegsaday - waxay saameyn weyn ku leedahay dabeecadaha isticmaalaha.
Waxbadan Ka Baro Midabbada iyo Midabbada Midabka
Color waxay kordhisaa aqoonsiga astaanta 80%, oo si toos ah u horseedaya kalsoonida macaamiisha. Waa tan sida midabyadu u saameeyaan macaamiisha Mareykanka:
Yellow - yididiilo iyo dhalinyaro, badiyaa loo isticmaalaa in lagu soo jiito dareenka daaqadaha ka adeeganaya.
Red - firfircoonaan, waxay abuurtaa deg deg, waxay kordhisaa garaaca wadnaha, waxaana badanaa loo adeegsadaa iibinta nadiifinta.
Blue - wuxuu abuuraa dareen kalsooni iyo nabadgelyo. Midabada madow waxaa badanaa lagu arkaa bangiyada iyo meheradaha (sida noocyadeyda oo kale).
Green - la xidhiidha hanti. Midabka ugu fudud ee ay indhuhu ku shaqeeyaan sidaa darteed waxaa loogu isticmaalaa dukaamada in lagu nasto.
Orange - dagaal badan. Tani waxay abuureysaa wicitaan-wax-qabad xoog leh oo rukumo, loo iibsado, ama loo iibiyo.
Pink - jacayl iyo dheddig, oo loo isticmaalo in lagu suuq geeyo alaabada haweenka iyo gabdhaha da'da yar.
Black - awood badan oo jilicsan. Waxaa loo adeegsaday suuq-geynta alaabada qaaliga ah.
Purple - loo isticmaalaa in lagu dejiyo oo lagu dejiyo, badiyaa waxaa lagu arkaa quruxda iyo alaabada gabowga.
Tafaariiqleyda, dukaamaysigu waa farshaxanka qancinta. In kastoo ay jiraan arrimo badan oo saameyn ku leh sida iyo waxa macaamiisha iibsadaan. Si kastaba ha noqotee, heshiis weyn waxaa lagu go'aamiyaa astaamaha muuqaalka, kan ugu xoogan uguna qancinsan waa midabka. Marka la suuqgeynayo alaabooyinka cusub waxaa muhiim ah in la tixgeliyo in macaamiisha ay ka dhigaan muuqaalka muuqaalka iyo midabka waxyaalaha kale sida codka, urka, iyo qaabka.
Sidee Midabyadu U Saameeyaan Xulashada Isticmaalayaasha iyo Iibsashada?
Waa tan xiise badan infographic laga bilaabo KISSmetrics midabka iyo saameynta ay ku leedahay go'aamada wax iibsiga. Qaar ka mid ah fikradaha:
Dukaameystayaasha Dareenka leh - waxay u badan tahay inay ka falceliyaan casaanka, oranjiga, madow, iyo buluugga boqortooyada. Waxaad ku arkeysaa midabadan cuntada degdegga ah, suuqyada laga baxo, iyo iibinta nadiifinta.
Dukaanleyda Miisaaniyadda - waxay u badan tahay inay la falgalaan buluugga buluugga ah iyo shaaha, oo lagu arko bangiyada iyo dukaamada waaweyn ee waaweyn.
Iibsadeyaasha Dhaqanka - waxaa soo jiitay casaan, buluug cirka, iyo midabyo casaan leh oo laga helo dukaamada dharka.
Mid ka mid ah qoraal muhiim ah oo ku dhex jira infographic-ka ayaa ah in dhaqamada kala duwan ay saameyn ku yeeshaan midabada si kala duwan!
Tags: madowcagaar buluugbunnimidabkaGanacsigaecommerceageegiorangedhaqanka iibsigacasrun gaari
Blogging Corporate: Macluumaadka
SMS ma dhiman. Weligaa Ma Maqashay Geo-Fencing?
Sep 17, 2010 at 9: 40 AM
Tani runtii waa wax xiiso leh!
Sep 17, 2010 at 2: 35 PM
Raadintaani waa mid laga cabsado… Waxaan ka fikirayey inaan dhowaan u sameeyo iib gaar ah macaamiishayda “miisaaniyad ahaan”. Oo hadda waan ogahay waxa midabyada loo isticmaalo!
Mahadsanid nin! Waxaan tixgelinayaa Manning "Wanaagsan" (waad ogtahay, kan run ahaantii ah QB!) 😉
Nov 9, 2011 saacadu markay tahay 7:01 PM
Aad u faa'iido badan. Kaliya waxaan ka fekerayay taas markaan abuurayay buug buuga maalin dhaweyd. Waad ku mahadsan tahay wadaagista!
Nov 9, 2011 saacadu markay tahay 7:34 PM
Waxaad sharad, Gray!
Nov 14, 2011 at 10: 09 AM
Nov 14, 2011 saacadu markay tahay 4:59 PM
Warqad aad u fiican Douglas, sawirkaaga guud wuxuu kuu hayaa qalab tixraac weyn. Waan jeclahay cilmu-nafsiga midabada iyo saamaynta ay ku leeyihiin suuqgeynta. Markaad dhex socoto sharraxaadda midabada, ma aha wax adag in isla markiiba la soo xusuusto tusaalooyinka mid waliba taageeray.